Ukucanda umda wepropathi yokuthengiswa kwezindlu kunye nokunxibelelana namaziko oluntu- iGeofumadas
Ukucandwa kwemida yepropathi nomhlaba kunye nokusebenzisana namaziko oluntu
NgoSeptemba, 2015 cadastre, UkuCwangciswa kweziThili
Lo ngumxholo oya kubhekiswa kwiNgqungquthela yesiBili yeGeometer yeNgcali, eya kubanjwa kwi-23 ka-Okthobha ye-2015 eMadrid.
Kungekudala, imithetho emininzi yempembelelo enkulu iye yamkelwe kwipropati yesakhiwo. Le ngqungquthela iya kugxininisa indlela ukuguqulwa koMthetho woMboleko kunye ne cadastre, kunye nomthetho omtsha woBugunya lokuZithandela uya kuthatha izenzo ezithile zemiphumo ekhethekileyo kubathengi. Abasebenzi bokuzimelela kunye namaziko karhulumente kufuneka baqinisekise ukuba iinkqubo zolawulo kunye nokuguqulwa kwezindlu zangaphandle ziqhutyelwa phantsi kweenkqubo ezifanelekileyo zekhwalithi kwaye zivelise ukhuseleko oluphezulu kubathengi nakubasomali.
Yindibaniselwano enomdla enomdla, apho kuyakufuneka kunyanzeliswe kumnqweno wokwenza indaleko yetekhnoloji ibekho kunye nomxholo wobugcisa kunye nomthetho, obandakanya abadlali abahlukeneyo betyathanga loLawulo loMmandla. Umgangatho LADM ichonga kwaye ifuna ukulungelelanisa olu lwalamano, njengoko bebhengezwe ngaphambili kwimizekelo cadastre Ngo-2014, apho abaqeqeshi abaqinisekisiweyo basebenza ngaphakathi kwesakhelo sobuchule babo kwaye apho izixhobo zomthetho zifumana umda wokungahambi kakuhle phakathi kokungxamiseka okungaphephekiyo kwintengiso yentengiselwano eyenzeka ngokusebenzayo nokuba yeyiphi ingomzuzu wobhaliso woxanduva ekwabelwana ngalo. Yayingomnye nje umzabalazo wokwenza ukuba uhambelane neenzame zokubekwa emgangathweni njenge-INSPIRE, i-EULIS, i-NILS, i-LANDxml, kunye ne-STDM-Kuya kuba lunomdla ukuqonda ingcamango yeFIG kunye izizukulwana ezintsha-.
Njengoko umhlobo wethu wasitshela TxusKumazwe aneziko elinobunzima, kuninzi umhlaba onokugubungela. Inani leGeometer-Ingcali libonakalisiwe njengenye indlela enokubakho kwezobuchwephesha kodwa ngokusebenza okuninzi kwi-geo-smoke.
Ukuchithwa ngokuthe ngqo kwepropati ye-propati eSpain akuqinisekanga naliphi na iqumrhu elisemthethweni kwimicimbi yepropati.
El cadastre Inomgangatho werhafu, ii-notary zikarhulumente zesazisi zinikezela ngokuchanekileyo ukuthengiswa kwezindlu, kunye neRejista yePropati ibhala iirhafu kunye neembopheleleko zepropati. Nangona kunjalo, akukho nanye kula ma-agentisa anenjongo yokuchaza kwaye achaze imida yeepropati ngokungenammiselo nangokusisigxina.
Ukuze uzalise le mfuno kwaye uzalisekise ukhuseleko lomthetho wepropati yendawo yokuhlala, ngokuhambelana namanye amazwe aseYurophu, inani le-GEX) ivela kwiGeometrica-Experto®.
I-Geometer-Expert yiComputer Engine, eneempawu ezilandelayo
Unesipiliyoni seYunivesithi kunye nezobuchwepheshe-zomthetho ezahlukileyo kwaye zamukelwa nguMbutho waseJapan weGeometry-Experts (AEGEX).
I-Intshuwalense Yemfanelo Yoluntu Yomsebenzi ejongene neentlawulo ozenzayo.
Unyanzelekile ukuba uqhube uqeqesho oluqhubekayo kwipropati yokuhlala, uqinisekiswe kwaye ulawulwe ngu-AEGEX.
Kuxhomekeke kulawulo olungqongqo lwamalungu omzimba ingakumbi ngokunxulumene nokungakhethi cala kunye nobungqongqo bomsebenzi wokuchaza imida.
Ifake isicelo semigangatho yokugqibela yokumisela kunye neeprotoksi ezichazwe ngu-AEGEX
Ukubhalisa i-Registry kwi-National Boundary Registry ukuqinisekisa ukugcinwa kwayo okuyimfuneko kunye nokupapashwa.
Kwimigaqo esemthethweni yaseSpain akunakwenzeka ukuqinisekisa imida yeepropati ukuba akuyiyo isivumelwano phakathi kwamaqela okanye isigqibo sokwahlulela, kungekhona kuzo zonke iimeko. Nangona kunjalo, iingxelo ezenziwe yiGeometer-Expert zona zifanelekileyo ezisemthethweni-ezobugcisa ukuba zikwazi ukubonisa abantu abathintelayo imida yepropati yendawo yokuhlala, ngenxa yokusetyenziswa kwemigangatho yamazwe ngamazwe ngokukodwa, nokungakhethi njengemfuneko ebalulekileyo inkcazelo echanekileyo, kwenye.
Le yi-ajenda enokuthi ixhunywe kule ngqungquthela:
9.00-9.30: Ukufumana nokuhanjiswa kwamaxwebhu
IMITHETHO ENTSHA YOKUPHATHWA, CATASTRO NOKUBHALISWAICCIÓNVOLUNTEER
10.00-10.40: "Ukuchongwa kunye nokuqinisekiswa"
D. Francisco Javier Orduña. INkundla kaMantyi ePhakamileyo
10.40-11.20: "Ifayile yefayile kunye nemida enkundleni"
D. Rodrigo Lacueva. Nobhala wezoBulungisa IQumrhu leNkqubela yeeNkundla zeeNkundla
11.20-12.00: Ifayile yefayile kunye nemigqaliselo kwinqununu ye-notary / registry "
UDrancoco Rosales de Salamanca: Umbhalisi we-Alcalá de Guadaira (Seville)
12.00-12.30: Ikhefu lekhofi
12.30-13.05: "Izenzo zangempela malunga namazwe afakwe kwi-domain yoluntu yasemhlabeni"
UNksk Cristina Mintegui. UGqwetha loCwangciso lweeDolophu kunye noNjingalwazi we-Master of Law kwiDyunivesithi yaseMalaga (eOfisini eMarbella)
13.05-13.40: "Justiprecio: ithuluzi lobugcisa beGeometers"
UDkt D. Manuel Alcázar. UProfesa kwiYunivesithi yaseJaén
13.40-14.30: Itafile ejikelezileyo
UKUHLAWULWA KWENKONZO YOKUPHILA INITI NGAPHAMBILI UKUPHATHWA KOLUNTU
16.00-16.30 "I-reparcelación yasezidolophini"
D. Francisco Merino. Umyili kunye neNtloko yeNkonzo MI Ayuntamiento de Marbella
16.30-17.00: "I-concentration concentration"
D. Eugenio Ruiz de los Paños. Agronomist I-ETM, SL (i-Ofisi eMadrid)
17.30-17.30: "Ingxaki yesicelo esisebenzayo"
UMnu José Díaz-Reixa. Ummeli woCwangciso loMmandla (i-Ofisi eSanta Cruz de Tenerife)
17.30-18.30: Itafile ejikelezileyo
Siyathemba kwaye siyazi ukuba iya kuba luncedo. Bhalisa apha.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iingcebiso ezi-4 zokuphumelela kwi-Twitter-Top40 Geospatial kaSeptemba 2015
Post Next I-Qgis -Ukulinganisa iipasile ezisekwe kwicandelo lesitshixo se-cadastralOkulandelayo »